Wasiirka Biyaha Oo Sheegay in Madaxweynaha Cusub Ka Dhabayn Doonno Balan Qaadyadii Horumarinta Goboladda Bariga | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Biyaha Oo Sheegay in Madaxweynaha Cusub Ka Dhabayn Doonno Balan Qaadyadii Horumarinta Goboladda Bariga
Hargaysa (SDWO): Wasiirka wasaaradda Biyaha Somaliland Prof. Xuseen Cabdi Boos, ayaa sheegay in shacabka gobalada Sool iyo Sanaag bari ay ka go’an tahay sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen goboladda kale iyo shacabka reer Somaliland.
Wasiir Boos, ayaa sidoo kale ku amaanay dadweynaha goboladda Sanaag bari iyo Sool sidii ay uga qayb qaateen codaytii doorashadii madaxtooyadda ee dalka ka qabsoontay 13-kii bishii November ee ina dhaaftay.
“Kalsooni weyn ayay I gelisay sidii ay u codeeyeen doorashadii madaxtooyadda dadka gobalada Sool iyo Sanaag bari. Waxaanay ka turjumaysaa siday uga go’an tahay in dadka reer Somaliland ay wax la qayb sadaan.
Iyagoo faraxsan ayay u codeeyeen, waxaanu u balan qaaday madaxweynaha la doortay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, in uu horumar gaadhiis doono goboladaas, waanu fulin doonaa balan qaadyadaas” ayuu yidhi Xuseen Cabdi Boos, oo maanta warfidiyeenadda kula hadlay Hargaysa.
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay in shirkadda Dp World ay qayb ka noqon doonto sidii biyo macaan loogu saari lahaa magaaladda Laascaanood, waxaanu tilmaamay in ay socdo mashruucii biyaha loogu saarayay Laascaanood.
Waxaanu tilmaamay in uu imika socdo mashruucii biyo-gelinta magaaladda Laascaanood, kaasoo laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF loo yaqaano.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Magaaladda Laascaanood oo aan biyo macaan lahayn, waxaa imika ka socota biyo-gelinta iyo meeshay biyuhu ka imanayaan iyo sida loo dhigayo beebka biyaha soo qaadaya.
Qorshahaasi marka uu dhamaado waxa safka labaad samaynaya oo laga maalgelinayaa sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF. shirkadda Dp World lafteedu qayb ayay ka noqonayaan biyo gelinta magaaladda Laascaanood oo diyaar ayay u yihiin in ay wax ka qabtaan”.